🥇 ▷ Galaxy Note 9 aad ayey ugu dhowdahay: kuwa horay u dalbay waxay heli doonaan Agoosto 24-keeda ✅
Galaxy Note 9 aad ayey ugu dhowdahay: kuwa horay u dalbay waxay heli doonaan Agoosto 24-keeda
Galaxy Note 9 waxaa lagu soo bandhigi doonaa Agoosto 9, 2018. Dhamaan waa fiicantahay, laakiin goormay noqon karnaa? Kuuriya gudaheeda waxay umuuqataa in amarada hore ay bilaaban doonaan bartamaha bisha Agoosto, waxayna umuuqataa inay lamid noqon doonaan annaga, marka loo fiiriyo wixii uu maanta qoray Twitter had iyo jeer si fiican u war qaba Roland Quandt.
Bartiisa twitter-ka ee maanta Roland ayaa noo ogolaanaya taas Galaxy Note 9 amar hore by hawl wadeenada way socon doontaa illaa iyo 23ka Agoosto. Dhab ahaantii waxay ku egtahay taariikhdaas inay tahay inay baxaan dhowr maalmood kahor, sidaa darteedna fikradda ah “bartamihii Agoosto” lama tuurayo.
AKHRISO: Sawirkan tooska ah ee note 9 wuxuu ina tusayaa kaameeraha jiifa iyo faahfaahintooda xiisaha leh
Laakiin warka wanaagsan ayaa jira helitaan: loogu talagalay kuwa soo xareeyay, taleefanka (oo ku xiran helitaanka) guriga ayuu ku imaan doonaa Agoosto 24. Sidaa darteed, waxay qaadataa wax ka yar hal bil in lagu hayo Qoraal 9. Waxkasta waxay umuuqdaan inuu xaqiijiyey hawl wadeen reer yurub ah, sidaa darteed ma jiraan (iska cad) xaqiijinta rasmiga ah ee Talyaaniga. Si kastaba ha noqotee, aan ka fikirno in xaaladdeena waqtigeeda aysan waqtiga ka duwanaan doonin.
Wada-hawlgalayaasha shirkadda Samsung (Yurub) waxay qaadanayaan amarro horudhac ah Galaxy Note9 illaa Agoosto 23. Macaamiisha horay u dalbay waxay helayaan qalab Agoosto 24. Waan ogahay in tan laga hor dhegeysan jiray, laakiin waxaan xaqiijin kaheyste yurub ah.
– Roland Quandt (@rquandt) July 26, 2018